Sida loo soo celiya iPhone ama iPad kaga imaanayo Lugood
Ever lahaa rush dhiig in marka iPhone ama iPad cararay gacmahaaga? Ama dareen in marka aad aragto daaqad soo booda isagoo sheegay in qalabka uu yahay in hab-kabashada ama marka shaashadda tagaa madow ama buluug ah sabab la yaqaan lahayn? Inkasta oo laga yaabo in aad u awoodo inuu bedelo screen ka jabay, waa xusuus qaali ah kuwa aadan dooneynin inuu waayo. Bal qiyaas laga badiyay kuwa aad sawiro iyo filimo ka safarada aad hore, ama in la dhiso maktabad music in dhammaan mar kale. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad samaysay aad xoogaa fulinteeda gurmad u faylasha aad, uma baahnid inaad wax badan ka walwalo. Waxaad soo celin karaa qalabka jira ama cusub ee aad la files ka yimid gurmad ugu dambeeyay.
Sida loo soo celiya inay Device a New la kaabta Lugood
Waxaad xulan kartaa in aad iPhone ama iPad waxaa uu aqrinayo arrin. Waxaad isku dayday in howleheedii qalabka by haysta hoos "Home" iyo badhamada "Power", laakiin qalabka ku guuldareystay inuu reboot. Isku day kale, waxaad isku dayay resetting aad iPhone, laakiin in sidoo kale ma shaqeeyaan. Next ikhtiyaarka ugu fiican waa in ay isku dayaan in ay soo celiso telefoonka in goobaha ay warshad. Waxaad raaci kartaa tallaabooyinka fudud in ay dib u soo celinta, sida hoos ku faahfaahsan:
Talaabada 1: Isku Your Device in Computer ah
By isticmaalaya cable USB ah, isku xiro qalab si aad u computer ah. Tani waa in ay computer aad ku badbaadi aad gurmad ah oo ku saabsan.
Talaabada 2: Burcad Lugood
Marka qalab aad ku xiran kombiyuutarka, Lugood waa in aan bilowno si toos ah. Haddii aan samayn, si fudud guji logo Lugood iyo bilowdo app ee gacanta. Fiiri haddii ay jirto update macruufka ah.
Tallaabo 3: Ku bilaw Celinta
Si aad u billowdo qalabka kabsaday aad, u tag File> Qalabka> Soo Celinta ka kaabta. Haddii aad computer waxaa socda on Windows iyo ma aad arki kartaa "File" menu, riix "Alt" fure aad keyboard.
Talaabada 4: Dooro Version kaabta
Iyada oo ku saleysan taariikhda iyo inta uu le'eg oo ka mid ah gurmad files heli karo, waxaad dooran kartaa nooca ugu badan ee khuseeya aad rabto in la soo celiyo aad telefoon si.
Talaabada 5: Buuxi noolaynta
Guji "Soo Celinta" si uu u dhameystiro nidaamka: qalab aad u hagaagsan laftiisa iyo Banaadir oo la your computer. Ha joojin bartamihii hab-.
Sida loo Xulo Soo Celinta kaabta Lugood
Ikhtiyaar kale oo aad dooran kartaa marka xulashada software wanaagsan si loo soo celiyo xogta ka gurmad Lugood waa Wondershare Dr.Fone ee macruufka (kabashada xogta iPhone) .
Software Tani waa software kama dambaysta ah soo kabashada xogta iPhone sida ay awoodaan si loo raad raaco oo soo kabsado files lumay, farriimo tirtiray, sawiro, videos, iyo qaabab kale oo badan oo file taageeray. Waa xal buuxda uga soo kabsado, ma ahan oo keliya ee iPhone, iPad iyo iPod, laakiin sidoo kale Touch. Riix badhanka Download hoose si aad u dejisan version Trial Free.
Raac tallaabooyinka hoose si aad u la kulmi fudayd ee la isticmaalo si ay u qabtaan soo kabashada xogta laga gurmad ah Lugood leh Wondershare Dr. Fone barnaamijka macruufka:
Talaabada 1: Dooro Mode Recovery
Marka hore, la bilaabay Wondershare Dr. Fone barnaamijka macruufka iyo intaas guji "Ladnaansho Lugood ee kaabta File ka" button. Ayaa shaqada Lugood gurmad soo kabashada awoodaan in la ogaado oo taxdo dhamaan Lugood files gurmad waa in. Faahfaahin ee file kasta sida magaca, taariikhda iyo tirada taxanaha ah lagu soo bandhigi doonaa si waafaqsan si aad tixraac.
Talaabada 2: bilaw Scan Action
Dooro files in aad jeclaan lahayd inay ka soo kabsadaan ka dibna riix "Start Scan" button. Muddada habka fiirsato waxay ku xirnaan doontaa cadadka iyo baaxadda faylasha aad soo kabsaday.
Talaabada 3: Falanqeynta Kulanka Xiisaha Leh iyo Select Files inuu ka soo kabsado Lugood
Marka habka iskaanka la soo gabagabeeyo, faylasha diyaar u ah soo saarista la soo daabici doonaa oo soo bandhigay sida waafaqsan in qaybaha ay. Waxaad ku eegaan karo files iyo sax ah oo ku saabsan kuwa idin baahan yahay. Markaas, si fudud guji "Ladnaansho" button kaas oo laga heli karaa hoose ee suuqa kala. Your fariimaha, xiriirada iyo qoraalada waxay yihiin si toos ah uga qalab aad haddii qalab ku xiran tahay inta ay socoto dib u soo kabashada.
Users ee Dr. Fone karaa in la aw in ay sidoo kale ku raaxaysan karaan faa'iidooyinka soo socda:
Data Recovery Sameeyey Easy
In kaliya seddex talaabooyin fudud sida xirmaan, scan iyo soo kabsado, users soo kaban karto xogta lumay ka qalabka midkood ama ka hayaan Lugood ama iCloud. Raadi iyo ceshtay aad qoraalo, taariikhda Whatsapp ama xataa Bookmarks Safari ee qasabno oo kaliya dhowr aad.
Haddii mid ka mid ah qalabka aad ku xayiran yihiin hab loop soo kabasho, screen buluug ama madow dhimashada, ama si fudud aan caadiga ahayd, software this bixisaa "Dayactir Operating System" muujinta in ka heli kartaa waxa dhan go'an ilaa dhawr daqiiqo.
Kabsado Your Files Xulo
Barnaamijkan kabashada xogta la dabacsanaan ah ee doorashada kasta files qofka ay doonayaan inay ka soo kabsadaan, intii la soo kabsado wax walba oo laga helay gurmad waxay bixisaa dadka isticmaala ay. Wondershare Dr. Fone ee macruufka la yimaado "Kulanka Xiisaha Leh" function halkaas oo dadka isticmaala arki kartaa macluumaadka karnay (photos, videos, xiriirada, wac taariikhda, farriimo iwm) oo kaliya qaado kuwa ay doonayaan inay ka soo kabsadaan.
> Resource > iPhone > Sidee soo celinta iPhone ama iPad ka kaabta Lugood